Android Phone: Waxaad gurmad oo si gooni gooni ah ugu soo celin kartaa 1 click
5. Android kaabta Tools
5.1 software kaabta Android
5.2 Apps kaabta Android
Ma doonaysaa in aad telefoon gurmad Android ka hor inta aanay dib u soo celinta in goobaha warshad ama u soo afjarno? Iska loo isticmaalaa in lagu samaynaya gurmad Android joogto ah haddii ay dhacdo in aad tirtirto karaa ama ku waayi xog qalad ah? Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, ayaa waxaa jira siyaabo badan oo u imid in aad i caawisaan. In this article, Waxaan jeclaan lahaa inaan idin tusin 3 siyaabood si aad u samaysaan gurmad ah u Android effortlessly.
Habka 1. kaabta iyo Soo Celinta Android SD Card Gacanta Habka 2. kaabta iyo Soo Celinta Android 1 Click la Tool Habka 3. kaabta Android iyo Soo celinta la Account a Google
Habka 1. kaabta iyo Soo Celinta SD Card Android Gacanta
Sida aad ogtahay, phone Android lagu rakibayaa karaa sida drive adag dibadda ee computer Windows. Kaarka SD ee telefoonka aad Android waa fudud loo heli karo. Iyada oo ku saleysan, waxaad awooddo si fudud gurmad iyo soo celinta music, video, sawiro iyo document files ee Android inay computer via koobi-koollada. Hadda socdaan iyada oo loo marayo tallaabooyin fudud hoos ku qoran:
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad Android inay computer.
Tallaabada 2. Marka computer ogaadaa oo aqoonsan telefoonka aad Android, telefoonka aad Android lagu rakibayaa doonaa sida drive dibadda adag.
Fiiro gaar ah: Dadka isticmaala Mac, aad u baahan tahay si loo soo dajiyo Transfer File Android on Mac ka dibna xirmaan telefoonka aad Android inay Mac.
Tallaabada 3. Go si aad u hesho telefoonka aad Android kombiyuutarka oo la furo.
Tallaabada 4. Sida aad ka arki, oo dhan fayl iyo files badbaadiyey kaarka SD waxaa lagu muujiyey. Fur, kuwaas oo fayl la odhan jiray Music, Photos, DCIM, Videos, iwm oo nuqul ka faylasha aad doonayso iyo iyaga gurmad in computer.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad awoodo gurmad wax walba oo ku saabsan kaarka SD in computer. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah content, sida laga daadiyo, dhaawacmi doonaa marka aad soo celiyo.
Habka 2. kaabta iyo Soo Celinta Android 1 Click la Tool ah
Qaybtan, waxaan idinku talinaynaa hal-stop Android gurmad qalab aad u. Waa Wondershare MobileTrans . Hoos waxaa ku qoran ay hordhac iyo tallaabooyinka fududahay in gurmad. Haddii Ma ahan wax fiican in aad gurmad qalab, waxaad ka akhrisan kartaa ugu fiican 5 gurmad Android software oo ugu wanaagsan ee 5-ada gurmad Android .
Best gurmad software ah ee Android inay gurmad Android aan soo afjarno!
Oo dhan Chine ee kaabta, xogta app, xiriirada, SMS, photos, music, videos sidoo kale Guda wac mar.
Kaabta xiriir la doortay, SMS, barnaamijyadooda, music, videos, sawiro iyo waraaqaha si kombiyuutarka.
Waraaqda file gurmad ah una soo celiso telefoon kasta oo ay taageerayaan Android.
Si fiican u shaqeeyaan Samsung, Sony, Google, HTC, Motorola, LG, Huawei, ZTE, iwm
Si Amaan ah gurmad aan khasaaro tayada wax.
Tallaabada 1. Isku Your Android inay PC
First of dhan, ka soo qaado ah cable USB Android in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay computer. Burcad software gurmad ee Android kombiyuutarka, iyo waxaad arki doontaa suuqa kala aasaasiga ah ee barnaamijka sida soo socota.
Tallaabada 2. kaabta Do Android Full 1 Click ama Xulo
In uu furmo suuqa hoose, guji "dib Your Phone". Software Tani waxay aad u ogolaanaya fariimaha gurmad, jadwalka taariikhda, video, music, sawiro, abuse wac, barnaamijyadooda. Ka sokow, waxaa xitaa waxaad ogolaanaysaa xogta app Android gurmad aan xididka.
Kaliya dooro xogta aad doonayay oo calaamadee sanduuqa ku yaala xagga hore waxaa ka mid ahka dibna riix "Start Copy" si ay u bilaabaan taageerto kor. Hubi in aan barkinta telefoonka aad Android ee geedi socodka gurmad. Maalin maalmaha ka mid, marka xogta aad ka heli khasaaro, waxaad soo celin karaa xogta si aad telefoonka aad Android.
Tallaabada 3. Soo Celinta File ee kaabta in Your Phone
Ka sokow gurmad dhan-in-ka mid ah, tani waxay gurmad Android inay software PC sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo celiyo taageeray in aad telefoon marka aad u baahan tahay. Qalabka Android, laakiin sidoo kale u ogolaataa Ma aha oo kaliya in aad u soo celiso qalabka macruufka aad. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waxaa dooranaya "Soo Celinta ka hayaan" ka dibna dooran "MobileTrans". Markaas waxaad dooran kartaa nooca file in aad rabto in aad soo celiso in aad qalab in la sii wado ka.
Habka 3. Android kaabta iyo Soo celinta la Account a Google
Sida Cinwaan u soo jeedisay, qaybtan diiradda saarayaa kuu sheegaysa sida loo raad raac phone Android inay hadhaysaa. Markaas, xitaa haddii telefoonka aad Android la xado ama la jejebiyey, waxaad si fudud dib ugu heli karaan xogta. Si phone Android gurmad in daruur, ugu horreeya oo dhan, laga yaabaa inaad taageero ka Google barbaro. Google ka sokow, waxaa tahay barnaamijyadooda qaar ka mid ah si ay u sameeyaan gurmad daruur u Android.
Taleefannada badan oo Android ku siin awood u leeyahay inuu si toos ah raad raac xiriirada, jadwalka taariikhda, password WiFi oo dheeraad ah in aad xisaabta Google. Mar kasta oo aad rabto, in aad dib u hesho karaa si fudud.
Calendar Android kaabta iyo Xiriirada
On telefoonka aad Android, tuubada Settings > Accounts oo hagaagsan . Saxiix shubo xisaabta Google. Sax xiriirada nidaameed . Haddii aad sidoo kale doonayaa in jadwalka Android gurmad, aad sax karaa nidaameed Kalandarada .
Settings Android kaabta
Tag Settings ka dibna heli kaabta iyo dib . Markaas, sax Back up xogta aan . Marka aan sidaa yeelno, aad awoodaan in ay xogta app gurmad, password WiFi iyo goobaha kale ee ay u server Google.
Import Xiriirada in ay Android Phone / Tablet
Apps Manager on Your Android Phone Effortlessly
Bedelka Muuqaalka Xiriirada in ay Android
> Resource > Android > 3 Siyaabaha kaabta iyo Soo Celinta Android Phone Effortlessly